OweChiefs uvuma iphutha ekunenebulweni yi-Al Ahly
U-STUART Baxter, umqeqeshi weKaizer Chiefs nomengameli weCaf, uPatrice Motsepe, ngemuva kokuthi leli qembu likhale ngaphansi kwi-Al Ahly yase-Egypt, kowamanqamu eCaf Champions League eMohamed V Stadium, eMorocco, ngempelasonto Isithombe: BACKPAGEPIX
Mthokozisi Mncuseni | July 19, 2021
UMQEQESHI weKaizer Chiefs obeqala ukubonakala ebhentshini kusukela ebuyile, uStuart Baxter, uvumile ukuthi wenze iphutha ngokuthwesa abafana abancane umthwalo ongaphezulu kwabo kowamanqamu weCaf Champions League eMorocco, ngoMgqibelo ebusuku.
Amakhosi akhale ngaphansi ngo-3-0 kwi-Al Ahly obekuwaphuca ingqayizivele yethuba lokuhlabana ngesicoco seChampions League obekuzobe kungokokuqala emlandweni wawo.
Ngaphandle kokumangaza kwesinqumo seChiefs sokubeka uBaxter ebhentshini (kusale ngaphandle u-Arthur Zwane noDillon Sheppard), kuthusile ukuqala lo mdlalo ngoHappy Mashiane, Njabulo Blom noNkosingiphile Ngcobo, bobathathu okungabafana abancane abakhushulelwe esikimini esikhulu ngesizini edlule.
Izinkinga zeChiefs kowamanqamu ziqale ngasekupheleni kwesiwombe sokuqala uMashiane ethola ikhadi elibomvu.
Bekusobala lapha ukuthi uMashiane ubephindisela ngesenzo sakhe kwazise ubesedlaliswe kabi amahlandla amaningi.
Uvumile ngemuva komdlalo uBaxter ukuthi isenzo sikaMashiane sikukhombise kwacaca ukuthi inkonyane isathuka isisinga.
“Kuliqiniso ukuthi lo mdlalo siwuqale ngabafana abancane (Mashiane, Ngcobo noBlom), kodwa kusobala ukuthi mhlawumbe sibafake emphandlwini wamabhubesi ngempela.
“Ngikholwa ukuthi badlale kahle kodwa uma ngizogxila kuMashiane, kunezikhathi lapho ibhola belimphunyuka isidingo singekho.
“UMashiane ugcina edlala kabi nje, yingoba ubephunyukwe yibhola. Ngiyavuma futhi ukuthi indlela adlale ngayo ibinokuziphindiselela okuyinto ongeke uyilindele kumdlali oseqine ukhakhayi,” usho kanje uBaxter ezeseka ngokuthi laba badlali bazifake bona esikimini ngendlela abebenza ngayo ejimini.
“Kuningi okwenzekile kulo mdlalo kodwa iqiniso ukuthi abadlali bami abancane bazivezile ukuthi basenebanga elide okusafanele balihambe,” kusho uBaxter.
Lo mqeqeshi uthe, iqembu lakhe ilona ebelingcono kodwa kuthe kungakhishwa uMashiane ngekhadi elibomvu, zaqala izinkinga.
“Angicabangi ukuthi kukhona ingozi ebesikuyona esiwombeni sokuqala ngoba i-Al Ahly ibingeyona inkinga kwazise nonozinti wethu ubeziphumulele.
“Ngiyavuma ukuthi sishayiwe la kodwa asikho isidingo sokuzibukela phansi ngoba esikwenzile kusicacisele ukuthi indlela yethu iyakhanya yinqobo nje uma sizokwehlisa umoya sithathe izinqumo ngomqondo ohluzekile,” kusho uBaxter.